Sidee darbiga looga saaraa gidaarka | Qurxin
Ka qaad sawirka gidaarka
Maria Jose Roldan | | Qurxin
Waraaqdu waa aalad aad u faa'iido badan oo lagu qurxiyo si aad ugu raaxeysato qurxin badan oo asal ah. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaan fursad u helno ka qaad gidaarka qol iyo taas, waxaan u sharaxaynaa sida loo sameeyo.
Waagii hore ku qurxin darbiyada gidaarka dushiisa Waxay ahayd wax iska caadi ah maantana farsamadan ayaa wali laga adeegsadaa guryo badan iyada oo ay ugu wacan tahay dhammaan faa'iidooyinka ay na siiso.
1 Xagee loo isticmaalaa waraaqda
2 Qalab isku dheelitiran
3 Beddel ama ka saar sawirka gidaarka
4 Ka qaad tallaabada tallaabo tallaabo tallaabo ah
4.1 Talaabo talaabo ah si aad uga saarto gidaarka gidaarka
5 Ka qaad arjiga waraaqda leh biyo la'aan
Xagee loo isticmaalaa waraaqda
Waxaad u isticmaali kartaa gidaarka gidaarka qolkaaga mooyee musqusha iyo jikada. Musqusha dhexdeeda kuma haboona qoyaanka awgiis (si fudud ayey uga sii dari laheyd) jikada awgeed urta cuntada awgeed laguma talinayo in la dhigo gidaarka gidaarka. Laakiin halkii, haa waad u isticmaali kartaa qol kasta oo aad doorbideyso inuu yahay qolkaaga jiifka, qolka fadhiga, hoolka, qolka jiifka caruurta oo xitaa waad isticmaali kartaa darbiga si aad ugu qurxiso derbiyada wadiiqooyinka.
Fikradaha lagu qurxiyo sawirka qolka jiifka
Xitaa waxaad u isticmaali kartaa gidaarka si aad u cusbooneysiiso alaab duug ah oo aad rabto inaad soo celiso iyo inaad rabto inaad siiso taabasho asal ah oo gebi ahaanba ka duwan. Waad ku mahadsan tahay tirada badan ee nashqadaha iyo qaabdhismeedka aad ka heli karto dukaamada jirka iyo dukaamada internetka, wax dhibaato ah kuma yeelan doontid helitaanka gidaarka gidaarka ee adiga kugu habboon, ama darbiyada ama u cusbooneysii qalabkaaga.
Qalab isku dheelitiran
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan gidaarka marka lagu daro kala duwanaanshaheeda qurxinta iyada oo ay ugu wacan tahay tirada naqshadaha kala duwan ee aad ka heli karto suuqa (oo si fiican loogu waafajin karo qaabkaaga qurxinta), waa in haddii aad daasho ka dib xoogaa ku qurxinaysay qol leh warqad gogol gaar ah, waad u badali kartaa mid kale adigoon dadaal badan sameyn.
Tani waa hal sabab oo ay dadku u doortaan gidaarka gidaarka si ay ugu qurxiyaan guryahooda, maxaa yeelay haddii ay daalaan, waxay kaliya ku qasbanaan doonaan inay doortaan gidaar kale, ka saaraan kii hore oo ku dar midka cusub. Waa hab aad uga jaban uguna fudud oo loo cusbooneysiiyo qolalka (ama alaab duug ah) waqti ka waqti. Waxaad ka fikiri kartaa warqad yar oo ka duwan kuwii hore ee xilli ciyaareed kasta haddii loo baahdo!
Beddel ama ka saar sawirka gidaarka
Haddaan ku daalnay waraaqda derbiga in aan ku haysanno aag guriga ka mid ah, waana rabnaa beddel ama rinjiga derbiga, ugu horreyntii waa inaan ka saarnaa warqadda aan haysanno. Tan darteed waxaan rabaa inaan ku siiyo xoogaa talooyin ah si hawshani u fududaato oo aysan u noqon biimayn dheer oo caajis badan.
Khiyaanada ugu weyn ayaa ku jirta qoyaan warqadda ku filan si ay u soo baxaan si fudud uga soo qaad darbiga adigoon bilaabin malaastii ama ka tagin googo 'yar yar oo ku dhagan, tan waxaan u isticmaali karnaa habab kala duwan:
Biyaha saabuunta: Habka ugu fudud uguna raqiisan waa in lagu diyaariyo baaldi biyo diirran ama diirran oo saabuun lagu nadiifiyo laguna mariyo rooga ama burush weyn oo lagu dhejiyo gidaarka. Waxaan u ogolaanay inay wax ku qabato daqiiqado, ama ilaa aan ka aragno inay bilaabatay inay jilciso ka dibna waxaan bilaabi karnaa inaan iska sifeyno iyadoo la adeegsanayo spatula.
Temple: Anaga oo raacayna isla farsamada adeegsiga biyaha saabuunta leh, waa inaan ku xanaaqnaa darbigayaga gidaarka ku xardhan rooga ama burushka, oo aan sugno inay jilciso ka hor intaanan bilaabin jeex jeexa warqadda.
Stepper Stepper: xulashada ugu xirfada badan ee aan haysanaa waa adeegsiga fiiqista uumiga, waa mashiin yar oo koronto ah oo biyaha kuleyliya haanta una rogta uumiga. Kani waxaa lagu dhejiyaa darbiga nooc bir ah oo darbiga laga mariyo si uu u jilco oo u kala baxo xabagta. Isla mar ahaantaana in uumiga la adeegsado, warqadda waa in laga sifeeyaa lakabka.
Mid kasta oo ka mid ah qaababkan, waa in lagu xisaabtamo in balastarka ka hooseeya gidaarka gidaarku uu jilci doono, markaa ka dib waa in loo oggolaadaa inuu soo baxo si uusan waxyeelo u soo gaarin.
Ka qaad tallaabada tallaabo tallaabo tallaabo ah
In kasta oo qodobka hore aan kuu sheegayo sida loo saaro sawirka gidaarka, xagga hoose waxaan rabaa inaan kaala hadlo talaabo talaabo ah si aad uga saarto dhib la'aan adigoon shaqo badan ku murgin. Tallaabadan tallaabo tallaabo ah waxaad u baahan doontaa:
Weelka dharka lagu dhaqo
Dhar duug ah oo dabaqa ah
Xalka si aad uga saarto gidaarka gidaarka
Qalab loogu talagalay xoqida gidaarka gidaarka
Dhalo buufin ah
Talaabo talaabo ah si aad uga saarto gidaarka gidaarka
Maryaha duugga ah dhig dhulka si wax kasta oo aad derbiga uga saarto ay u soo dhacaan. Ka qaad taarikada furayaasha iyo fiilooyinka korontada derbiyada. Iska jar awoodda qolka aad ka saareyso gidaarka gidaarada.
Isticmaal qalin si aad ugu sameysid daloollo yar yar warqadda gidaarka si markaa xalka si fudud ugu dhex maro qaybta xabagta.
Waxaa jira xalal ganacsi ahaan loo diyaariyey oo looga saarayo gidaarka, laakiin sidoo kale waxaad u isticmaali kartaa biyo kulul dareeraha si aad uga saarto waraaqda Xalka geli dhalada lagu buufiyo. Biyuhu waxay u baahan yihiin inay kululaadaan markaa waxay ku habboon tahay inaad xalka ugu qasto qaddar yar.
U isticmaal dhalada lagu buufiyo darbiga oo waxaad si fudud uga saari kartaa gidaarka, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad biyaha u dhaafto darbiga ilaa 15 daqiiqo ka hor intaadan ka saarin gidaarka
Ka qaado darbiga hoose geeska hoose oo kor u taag. Isticmaal mindi balaaran oo ballaadhan si aad ugu fududaato inaad ka saarto warqadda. Ku celi tallaabooyinka kor ku xusan illaa aad gebi ahaanba ka wada saarto warqadda.
Baaldi, ku dar qaado qaado oo weelka lagu dhaqo biyo aad u kulul iyo isbuunyo ku nadiifi darbiyada si fiican si aad uga saarto dhammaan raadadka xabagta ee gidaarka. Ugu dambayn, ku nadiifi darbiyada biyo nadiif ah kuna qalaji tuwaal.
Ka qaad arjiga waraaqda leh biyo la'aan
Haddii aadan rabin inaad u isticmaasho biyo si aad uga saarto waraaqda gidaarka, ha moogaan habkan si aad uga saarto mashiinka uumiga. Thanks to channel kanaalka Carol ee couscous iyo couscous waxaan arki karnaa tillaabadan weyn tallaabo tallaabo ah iyada oo aan dhibaatooyin badan la qabin Ha moogaan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Qurxinta » Qurxin » Ka qaad sawirka gidaarka
Kaffeine wallpaper dijo
Farriin weyn! In kasta oo aan jeclaan lahaa inaan tilmaamo inay tani run tahay waraaqaha badankood, haddana waxaa jira nooc ka mid ah walxaha aan u baahnayn shaqo intaas ka badan. Waxaa loo yaqaan 'non wowen' ama warqad aan tolmo lahayn. Waxay leedahay gaar ahaaneed inay aad u fududahay in la dhejiyo maaddaama ay tahay inaad kaliya ku dhejiso derbiga, oo aan ahayn warqadda, oo aad u fudud in laga saaro. Sida ugu fudud ee kor loo qaado gees iyo kala bixid. Biyo la'aan, xoqado, mashiinno la'aan, Si fudud oo fudud.
Ku jawaab waraaqda gidaarka kafeega
Hambalyo maqaalka. Sawiro qurux badan.
Jawaab Massimo Bassi
Sida loo abuuro loona qurxiyo miis aroos macaan
Robotyada jikada ugu fiican suuqa